Caaryada caaryada wax taaj oo kale duritaanka u hoggaansamaan isbeddellada horumarka ee mustaqbalka - Aojie caaryada Co., Ltd.
Caaryada caaryada wax taaj oo kale duray waafaqsan isbeddellada horumarka ee mustaqbalka
Hadda isbeddelka bulshada, horumarinta caaryada waa mid aad u dhakhso badan. Hawsha duritaanka caaryada caaga ah ayaa dadku aad u jecel yihiin. Marka la eego rajada suuqa, mustaqbalka waa la filan karaa. Shandong Zheng Warshadda Caaga Caaga ah waxay u dhigantaa horumarinta wakhtiyada, teknoloojiyadeeduna si dhakhso leh ayay u soo hagaageysaa.
Xaaladda hadda jirta ee horumarinta caaryada duritaanka xaaladda hadda jirta ee qaab -dhismeedka waxsoosaarka warshadaha caagga ah ee Shiinaha ayaa soo maray in ka badan nus qarni, waxayna samaysay horumar weyn. In caaryada weyn, waxaan ku soo saarnay 48 Inch shaashad balaastig ah oo ah midabka shaashadda balaastigga ah, 6.5kg mashiinka dhaqidda awoodda weyn, caag caag ah oo dhammaystiran, iyo sidoo kale bumper -ka baabuurka iyo caag caag ah oo muraayad ah. Marka la eego caaryada caagga ah ee saxda ah, waxaan awoodnay inaan soo saarno qaybo caag ah iyo caaryaal loogu talagalay kaamirooyinka. Dalool caaryada yar yar ee godadka iyo caaryada caagga ah.
Waqtigan xaadirka ah, caaryada orodka kulul ayaa si tartiib tartiib ah loo caan baxay, in ka badan 20% ayaa loo adeegsaday warshadaha qaarkood. Waxay badanaa adeegsadaan kuleylka gudaha ama qalabka kuleylka kuleylka dibedda, iyo sidoo kale heerka sare ee adduunka ee qalabka adag ee irbad waalka qalabka orodka kulul. Heerka sare ee adduunka ee cirbadda waalka caaryada orodka kulul. Si kastaba ha noqotee, heerka korsashada ee orodyahanka kulul guud ahaan wuu ka yar yahay 10%, taas oo aad uga duwan tan 50% ilaa 80% dibedda.
Codsiga CAD / CAE / CAM oo leh horumarka degdegga ah ee warshadaha iftiinka iyo soosaarka baabuurta, naqshadaynta caaryada ayaa si weyn looga welwelay, waxayna samaysay warshado. Si kastaba ha ahaatee, warshadaha caaryada ee Shiinaha waa la'aanta shaqaale farsamo, kala duwan, sax hooseeyo, wareegga wax soo saarka gaaban, nolosha gaaban, sahayda gaaban. Qaar ka mid ah caaryooyinka waaweyn, kakan iyo kakanba kaligood ma soo saari karaan. Waxay ku qaadataa malaayiin iyo tobanaan milyan oo doollar in dibedda laga soo dejiyo sannad kasta, taas oo xaddideysa horumarinta warshadaha caaryada ah. Sidaa darteed, waxaa lagama maarmaan ah in la horumariyo warshadaha caaryada. Si loo hagaajiyo heerka naqshadeynta iyo kartida wax -qabadka ee shirkadaha caaryada ah. Nidaamka CAD / CAE / CAM ee ay ku taliyeen Shiinaha Dhimashada & ururinta caaryada ayaa ku habboon Shirkadda Die & Mold Company iyo warshadaha dhinta & warshadaha caaryada.
Nidaamka CAD / CAE / CAM ee naqshadaynta caaryada iyo farsamaynta uma baahna nidaam aad u weyn, laakiin wuxuu u baahan yahay shuruudo sare dhinacyada qaarkood, sida qaabaynta dusha sare iyo mashiinka CNC ee saddexda dhidibka ah. In kasta oo qaar ka mid ah nidaamyada CAD / CAE / CAM ee ajnabiga ahi ay leeyihiin shaqooyin awood leh oo ah qaabaynta dusha 3D, falanqaynta xubinta xaddidan, wax-soo-saarka kombiyuutarka iyo maareynta xogta wax soo saarka, waa qaali oo way adag tahay in loo dulqaato shirkadaha guud.
Saldhigga cirbadda caaryada caagga ah ee hormuudka u ah horumarinta waqtiyada, xagga horumarka dabaysha, mustaqbalka waa la filan karaa.